विद्या भण्डारीले मदन भण्डारीको सपना पूरा गरिन्, अब विद्या भट्टराईले रवीन्द्र अधिकारीको सपना पूरा गर्छिन् – Life Nepali
विद्या भण्डारीले मदन भण्डारीको सपना पूरा गरिन्, अब विद्या भट्टराईले रवीन्द्र अधिकारीको सपना पूरा गर्छिन्
काठमाडौ । विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् । उनी अहिले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल बिताउँदैछिन् । तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर उनी राष्ट्रपति चुनिएकी हुन् । भण्डारीका पति तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी हुन् । उनको २६ वर्षअघि २०५० जेठ ३ गते चितवनको दा’सढुं’गामा भएको जीप दु’र्घटनामा परी नि’धन भएको थियो । जसमा संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित पनि थिए । दासढुंगा घ’टनालाई अहिलेसम्म रहस्यमय मानिएको छ ।
यो दु’र्घट’नाबारे अहिलेसम्म भएको छानबिनले कुनै तथ्य निकाल्न सकेका छैनन् । दुर्घटनाका एक मात्र साक्षी तथा जिपका चालक अमर लामाको समेत हत्या भएपछि यो घ’टना झनै रह’स्यमय बन्न पुगेको छ । भण्डारीकै विरासतमा विद्यादेवीले निरन्तर चुनाव जित्दै आएकी थिइन् भने पार्टीको उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिसम्म बनिसकेकी छन् । मदन भण्डारी चढेको जीप दु’र्घटनालाई षड्यन्त्र भन्दै आएको एमालेले त्यसकै नारा भजाएर चुनावसमेत जित्दै धेरैपटक सरकार बनाइसकेको छ ।
तर, अहिलेसम्म प्रभावकारी छानविन नभएकोमा विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि जनाउने गरिएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार बन्दासमेत आफ्ना नेताहरुको नि’धनबारे छानबिन नगरेको भनेर गुनासो हुने गरेको छ । दु’र्घटनाबारे तत्कालीन सरकारले प्रचण्डराज अनिलको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । एमालेले आफ्ना नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो भने पछि पद्यमरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा समेत छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो ।
तर, सबै छानबिन आयोग र समितिले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् । कम्युनिस्टहरु नागरिकबाट चुनिएर मात्र सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भण्डारीले नागरिकको बहुदलीय जनवादको विकास गरेका थिए । एमाले मात्र होइन, देशकै नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता बोेकेका नेता, स्पष्टवक्ता, निडर र दूरदर्शी नेताको नाममा एमाले मात्र होइन, विद्यादेवीले नै मुलुकमा शासन गरिरहेकी छन् । तर, मदन भण्डारीको सपना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
यसैक्रममा अहिले अर्की विद्या भट्टराईको चर्चा चुलिएको छ । उनी कास्की २ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेकी छन् । उनी स्व.रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी हुन् । जनतासँग भोट माग्न जाने क्रममा विद्याले आफू रवीन्द्र अधिकारीको सपना पूरा गर्न चुनावमा उठेको भन्दै आएकी छन् । तर, रवीन्द्र अधिकारीले देश कस्तो बनाउँछु भनेर न त कुनै किताब लेखेका छन्, न त कतै विचार वा प्रतिवेदन नै लेखेका छन् ।
राजनीतिमा लागेको तीन दशकपछि पहिलोपटक नागरिक एवं पर्यटनमन्त्री बनेका रवीन्द्र अधिकारी बरु उल्टै वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा मुछिए । सो विवादको किनारा लाग्न नपाउँदै उनको हे’लिकोप्टर दु’र्घट’नामा नि’धन भयो । उनले अब विद्या भट्टराईले कसरी कस्तो ढंगले रवीन्द्र अधिकारीको के कस्ता सपना पूरा गर्ने हुन् ? त्यो त निर्वाचनपछि थाहा हुन्छ । तर, एउटा कुरा सत्य के हो भने श्रीमान्को नि’धनप’छि मात्रै महिलालाई राजनीतिमा ल्याउने र त्यसलाई भ’जाएर चुनाव जित्ने परिपाटी हरेक देशमा हुँदै आएको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । क्यानाडा नेपालबाट
Previous रेखा थापले जनकपुरबाट सुरु गरिन् हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियान !
Next अफताब आलम जे’ल च’लान …